Ankoatra ny fiandrasan’izy ireo ny fahavitan’ny 15 andro hifampidinihana amin’ny fanjakana dia mbola hisy indray ny fivoriana ny 29 oktobra ho avy izao. Miahiahy tanteraka ankehitriny ny SECES mahakasika ny fanadinana Bakalorea ary manontany tena ny amin’ny fandraisana andraikitr’ireo lehiben’ny foibem-panadinana sy ny filohan’ny mpitsara. Aleo hazava tsara ny fepetra sy ezaka raisin’ny fanjakana, hoy ny SECES mba tsy hiverenana intsony amin’ireny tranga mamohehatra ireny. Nanambara ihany koa izy ireo fa misy ireo olona tsy meloka kanefa gadraina tsotra izao hanehoana fa mandray andraikitra ny fanjakana. Ireo tena nahavanon-doza no tokony hojerena ary hosaziana mafy noho izy ireo mamotika tanteraka ny hoavin’ny taranaka. Mahakasika ny fihaonana dia efa nampanantena ny minisitera mpiahy fa hihaona amin’ny SECES rehefa vita ny fanadinana Bakalorea.